Kuqoshwa i-DVD ngomdlalo uMshika Shika | IOL Isolezwe
Kuqoshwa i-DVD ngomdlalo uMshika Shika
Isolezwe / 20 June 2012, 10:52am /
Majozi ubengomunye wabalingisi abebeqavile emdlalweni obizwa ngoMshika Shika okuzokhishwa i-DVD yawo. Isithombe: Bongiwe Mchunu
Mdabe oshisa izikhotha ngezingoma ezifana nethi Sengikhathele ngomunye wosaziwayo abasemdlalweni wethelevishini obizwa ngoMshika Shika osekuzokhishwa i-DVD yawo
BAZOZITHOKOZELA abalandeli bomdlalo wethelevishini osanda kuphela obizwa ngoMshika Shika, izindaba zokuthi kuzokhishwa i-DVD eneziqephu ebezikhonjiswa zalo mdlalo.
Lo mdlalo obukhonjiswa kuMzansi Magic ngoLwesibili ebusuku uzokwenza okungajwayelekile nokuzojabulisa abalandeli bawo ngale DVD njengoba kungasiyo into eyandile kuleli ukuthi umdlalo ovutshelwe kuleli nobukhonjiswa kuthelevishini uphinde utholakale njengefilimu ngalolu hlobo.
UNomphelo Ndzimela okhulumela uMzansi Magic, uthe konke sekumi ngomumo ngale ngqophamlando njengoba sekusele ukuthi idedelelwe umphakathi ngoJulayi nonyaka.
“Njengamanje sesiphezu kwezinhlelo zokuqhubeka neziqephu (ezintsha) zoMshika Shika ezizotshengiswa ekuqaleni konyaka ozayo kanti asikathathwa isinqumo sokuthi nalezo ziqephu zizokwenzelwa i-DVD noma cha,” kuchaza uNomphelo.
Uthe okwamanje abakafuni ukuphumela obala ngabalingisi njengoba lo mdlalo ubugabe ngabalingisi abavele abangosaziwayo njengoMxolisi Majozi odume ngelikaZuluboy kubathandi be-hip hop, uMnqobi Mdabe odume ngelikaShota kubathandi bomculo we-house nabanye.
UNomphelo uthe yize kuzobe kuqopheka umlando ngoMshika Shika kodwa uMzansi Magic usunesikhathi ukhipha ama-DVD ezinhlelo ezikhonjiswa kulesi siteshi njengemidlalo efana ne-48 nothi Who Made Me Pregnant.
“Okunye okwenza uMshika Shika wehluke ngokuthi ungumdlalo wokuqala esiwenze ngokuhlanganyela nenkampani ebizwa nge-DVD8 Films nokuyibona abahlanganise amakhanda nenye okuthiwa yi-Indigenous Films okuyiyona ezosabalalisa i-DVD yoMshika Shika,” usho kanje.
Uthe imigomo yesiteshi uMzansi Magic ivumela abenzi bamafilimu adlalwa kulesi siteshi ukuthi bazenzele imali ngokudayisa ngama-DVD omsebenzi wabo esikhathini esiyiminyaka emibili wakhonjiswa lowo mdlalo.
“Thina sibe sesibasiza ngokubamakethela leyo DVD ngokuyikhombisa kuMzansi Magic,” kuchaza uNomphelo.